प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा को–को जादैछन ? – YesKathmandu.com
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा को–को जादैछन ?
सोमबार ०३, फागुन २०७२
काठमाडौ ३ फागुन । फागुन ७ गतेदेखि हुने भनिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा मन्त्री,सांसद,व्यापारी पत्रकार जाने भएका छन् । करिव ५० जना उक्त भ्रमणमा जाने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भारत गर्न थालेका ओलीको भ्रमण टोली पनि जम्बो हुने बताइएको छ । सत्ता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि सहभागि हुने भएपछि भ्रमण टोली जम्बो हुने भएको हो ।
दिल्ली भ्रमण र त्यहाँ हुने सहमति दलीय आलोचना मुक्त बनाउन सबै मुख्य राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदलाई टोलीमा समावेश गराउन लागिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनायो ।
प्रधानमन्त्रीका साथ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जानेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई टोलीमा समावेश गरिनेछ ।
एमालेबाट सांसदहरू लालबाबु यादव र राजन भट्टराई टोलीमा छन् ।
एमाओवादी, जनमोर्चा, राप्रपालगायत चार दलका चार सांसद भ्रमण टोलीमा हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीकै दलका एक मन्त्री र अन्य दुई प्रमुख दलका मन्त्री पनि टोलीमा छन् । मिडियाका तर्फबाट राष्ट्रिय समाचार समिती र नेपाल टेलिभिजनबाट जाने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री दिल्ली पुगेको भोलिपल्ट राजनीतिक भेटघाट सकेर पर्सिपल्टदेखि बाहिरको अध्ययन र निजी क्षेत्रको अन्तक्र्रियामा लाग्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओली दिल्लीपछि मुम्बई जानेछन् । त्यहाँ भारतीय व्यापारिक समूहसँग नेपालका व्यापारीहरूसहित छलफल गर्नेछन् । त्यसपछि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हेर्न गुजरातको भुज जानेछन् । त्यहाँबाट फर्केलगत्तै उनी टेरी डयामको अवलोकन गर्न उत्तराखण्ड पुग्नेछन् ।
साग फुटवलको उपाधिका लागि आज नेपाल भारतसंग भिड्दै
महाधिवशेन लम्विदा थप तीन दिन प्रतिनिधी राखिने, खर्च करोड पुग्ने
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको जन्म २०१७ साल नै होःनेपाली सेना
मन्त्रीको सदर, क्याबिनेटको बदर !
कालोबजारी भइरहेको वेला थानकोट डिपो भरियो
ट्राफिक जाममुक्त घोषणा भयो ललितपूर महानगरपालिका
एकै पटक २० हजार कर्मचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियारको निर्देशन
नेपाली वैज्ञानिकले पूरा गरे ग्यालिलियोको अधुरो सपना
केटी जिस्क्याउँदा युवकको हत्या
गरिमामय सदनमा मान्यज्युका तुच्छ शब्द
मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड मंगलबारदेखि रातको समयमा बन्द
प्रचण्डको ओत लागेर यि व्यक्ति यसरी बने मालामाल !
मिल्न बाँकी विषयमा टुङ्गो लगाउन दुई अध्यक्षलाई जिम्मा